Canshuur yaan laga qaadin Eastleigh - BBC News Somali
Canshuur yaan laga qaadin Eastleigh
16 Juunyo 2010
Image caption Suuqa Eastleigh ee Soomalida wuxuu ka mid yahay suuqyada ugu wayn Nairobi oo looga imaado dalalka barigaAfrika
Maxkamadda Sare ee dalka Kenya ayaa amartey in si ku meel gaar ah ay Dowladda Hoose ee magaalada Nairobi u joojiso, qaadista canshuuraha iyo khidmadaha kale ee xayeysiinta ganacsiga ee xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee Eastleigh.
Go'aanka ayaa waxaa uu ka dambeeyey dacwad ay maxkamadda hor geeyeen guddiga ganacsatada xaafadda Eastleigh, iyagoo ku andacoonaya in dowladda hoose ay gabtey dayactirka waddooyinka, nadaafadda iyo adeegyada kale ee muhiimka ah.
Go'aanka maxkamadda ayaa Soomaalida ku dhaqan magaalada Nairobi ay si weyn ugu riyaaqeen, una arkeen guul u soo hoyatey.
Kusimaha Guddomiyaha Guddiga Ganacsatada Xaafadda Eastleigh, Xuseen Maxamed Aar oo ka mid ah xubnaha dacwadda ku soo oogey Dowladda Hoose ee magaalada Nairobi ayaa sheegey in xaafadda iyo goobaha ku hareereysan laga qaado canshuur kor u dhaafeysa ilaa 900 oo milyan oo shilinka Kenya ah, balse aan waxba looqu qaban adeegyada horumarinta ee xaafaddu u baahan tahay.
Maxkamadda Sare ayaa bishan 22keeda lagu wadaa inay dhegeysato jawaabta dowladda hoose ee ku aadan eedaymaha loo soo jeediyey, balse ganacsatada xaafadda Eastleigh ayaa filaya in maxkamaddu ay sii kordhin doonto muddada joojinta canshuur qaadista.
Ku-simaha Guddoomiyaha Guddiga Ganacsatada xaafadda Easteligh ee magaalada Nairobi, Xuseen Maxamed Aar waxaa uu wareysi uu dacwaddaasi ka dhanka ah dowlada hoose siiyey BBCda.